Located on the outskirts of Yangon, this project is the extension of an existing meditation centre, comprising prayer/meditation halls and an accomodation wing. The entrance is viaabridge overawater body, lined with traditional spires, representingalink between the old and the new, more contemporary structure.
ရန်ကုန်မြို့ အစွန်းဘက်၌ တည်ရှိပြီး ဤ တရားထိုင်သည့်ကျောင်းသည် တိုးချဲ့ထားသောကျောင်း ဖြစ်သည်။ တရားထိုင်ခန်းနှင့် တည်းခိုခန်း ရှိပါသည်။ အဝင်မှာ ရှိသည့် ထိပ်ချွှန် ပါရှိသော တံတားသည် ရှေးဟောင်းသည့် အဆောက်အအုံနှင့် ခေတ်မှီသည့် အဆောက်အအုံ ချိတ်ဆက်ခြင်း သင်္ကေတ ဖြစ်သည်။
Расположенный на окраине Янгона, это здание будет продолжением уже существующего центра, который включает молельные залы и залы для медитаций, а также жилые помещения. Добраться до этого центра можно через мост над водой, украшенный традиционными спиралями, которые символизируют связь старой и новой, более современной, конструкции.